Waa maxay estuary: sifooyinka, noocyada, flora iyo fauna | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 14/06/2022 10:00 | Kala bixid
Deegaanka dhulku waxa uu leeyahay noocyo kala duwan oo hab-nololeedyo kala duwan oo isku dhafan biyaha macaan ee ka yimaada wabiyada iyo biyaha cusbada ee ka yimaada badda. Nidaamyada deegaanka waxaa loo yaqaan estuaries. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ma oga waa maxay estuary. Waa hab-nololeed isku-dhafan oo mas'uul ka ah isku-dhafka biyaha webiyada iyo badda. Meelahan biyaha ah ayaa waxaa lagu xiray dhul ka mid ah dhulka xeebaha ah oo u furan badda.
Maqaalkan waxaan kuu sheegi doonaa waxa uu yahay qolka labiska, sifooyinka iyo muhiimada.
1 waa maxay estuary
2 Sida ay u samaysan yihiin
3 nooca estuary
4 Dhirta iyo xayawaanka Estuary
Estuaries waa deegaan iyo gabaad noocyo badan oo dhir iyo xayawaan ah. Noolayaashani waxay ku tiirsan yihiin hab-nololeedyadan si ay u noolaadaan, u quudiyaan oo ay u tarmaan. Noocyada kala duwan ee estuaries waxaa loo kala saaraa iyadoo loo eegayo aagga socodka biyaha. Biyahani waxay ku dhamaadaan badaha, bays, coves, lagoons, jardiinooyin ama kanaalo. Estuaries waxay isku daraan biyaha macaan ee kanaalka iyo biyaha cusbada ee badda. Iskahorimaadkan biyaha ee milixyada kala duwan ayaa keenaya qulqulo sare.
Maanta xuubka waxaa loo isticmaalaa sidii aag mararka qaarkood loo isticmaalo madadaalada, dalxiiska iyo ujeedooyinka sayniska. Mid ka mid ah sifooyinkeeda ugu muhiimsan waa mid ka mid ah hababka deegaanka ee ugu waxtarka badan meeraha oo dhan. Halkaa waxa laga soo saaraa maadada organic in badan oo ka mid ah nafaqaynta dhulka ay wabiyadu qaadaan, dhanka kalena, laga soo saaro nafaqooyinka ay qaadaan baddu.
Sida nidaam badh-xidhan, waa kala beddelashada agabka dhowr deegaan oo dariska ah. Guud ahaan, waa meelo aad u qoto dheer, taas oo macnaheedu yahay in iftiinku si fudud u galo biyaha. Sababo la xiriira xaaladahan deegaanka, heerka photosynthesis ee estuary waa mid aad u sarreeya. Waxaas oo dhami waxay gacan ka geystaan ​​wax soo saarka aasaasiga ah ee wanaagsan. Waa in sidoo kale la xasuusnaado in noocyo badan oo ka mid ah isticmaalka bani'aadamku ay ku nool yihiin hareeraha, sida qolofleyda, molluscs iyo kalluunka qaarkood.
Mid ka mid ah awoodaha estuaries waa in la hayo xaddi badan oo biyo ah iyo ka hortagga fatahaadda. Waxay sidoo kale ka hortagaan waxyeelada xeebaha inta lagu jiro dabaylaha. Sidaa darteed, waxay sidoo kale aad muhiim ugu yihiin maareynta dadweynaha. Xaaladaha qaarkood, socodka webigu wuxuu qaadaa biyo badan, taasoo keenta wasakh iyo wasakh la beddelo. Waad ku mahadsan tahay qulqulkan xoogga badan, biyuhu waxay ahaanayaan nadiif.
Sida ay u samaysan yihiin
Estuaries waxay ku daraan biyo macaan si ay u sameeyaan biyo-mareen maadaama biyaha baddu ay ka soo qulqulayaan biyaha badda inta lagu jiro hirarka sare. Dabadeed, marka uu baddu yar yahay, biyaha macaan ayaa ku shubma badda. Taasi waxay keentay dhiiqo weyn oo ku taal aagga.
Dhirta ay sameysteen isku dhafka biyaha cusub iyo milixda waxay sameeyaan habab deegaan oo kala duwan, halkaasoo noocyada dhirta iyo xayawaanka ku nool meelahan ay isugu yimaadaan. Estuaries waa aagagga kala-guurka halkaasoo maydadka biyuhu kula kulmaan kuwa kale ee u dhow badda. Caadi ahaan waa biyo diiran oo leh nidaam deegaan oo u gaar ah.
Dabaqyada badanaa way sameeyaan, laakiin Kulaylaha waxaan sidoo kale ka heli karnaa mangroves, kuwaas oo ah meelo dhiiqo badan. Waxay leeyihiin nidaam deegaan oo kala duwan. Waxaan heli karnaa meelo badan oo qoto dheer ama ka yar, oo leh meelo dhoobo ama dhagax ah.
Xayawaanku way kala duwan yihiin, meelahaasna waxay ku biiriyaan maadada organic aad ugu badan meeraha taasoo ay la barbar dhigi karaan cabbir ahaan kaymaha ama dhul-daaqsimeedka. Deegaannada duurjoogta oo aad muhiim u ah ayaa laga sameeyay meelahaas, iyo Waxay kaloo u shaqeeyaan sidii sifaynta biyaha.
Dhaqaalaha gobollo badan oo xeebuhu waxa ay udub dhexaad u yihiin dhul-badeedka sababtoo ah dadka qani ku ah kalluunka, shellfish, ama algae. Waa goobo caan ku ah dalxiiska, shimbiraha daawashada ayaa aad ugu badan goobahaas, waana goobo u gaar ah aqoonta iyo aqoonta sayniska.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo estuaries ah iyadoo ku xiran qaar ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan. Nooc kasta oo ka mid ah cidhifyada waxaa lagu go'aamiyaa xidhiidhka ka dhexeeya qadarka biyaha wabiga inta lagu jiro baadka iyo cadadka biyaha baraf laftiisa. Halkan waxaan ka heli karnaa dhowr nooc oo estuaries ah:
Estuary Wedges milix: Waxay samaysaa marka ay wabigu ka badan yihiin biyaha badda. Sidan oo kale waxaan ku leenahay isku dhafka leh lakabka wareejinta khafiifka ah ee u dhexeeya biyaha webiga ee sare iyo jeexjeexyada hoose ee hoose.
Dhismooyinka aadka loo habeeyey: Noocyada noocaan ah, qaddarka biyaha saafiga ah ee imanaya way ka badan yihiin kuwa badda, laakiin maaha wax badan. Xaaladahan ayaa sababa isku dhafka biyaha ee u dhexeeya qaybaha kala duwan ee biyaha si ay ugu dambeyntii u sameeyaan lakab sare oo cusbo leh maadaama mowjadaha ay keenaan biyaha badda oogada. Marka ay labada biyood isku darsamaan, waxay sameeyaan lakabyo.
Dhir yar oo si khafiif ah loo habeeyey: Estuary halkaasoo mugga biyaha webigu uu ka yar yahay kan biyaha badda. Marka la barbardhigo labadaba, milixyada biyaha halkan ayaa si weyn isu beddelay. Lakabyada sare, salinity-ga ayaa isbeddelaya, sida lakabka hoose. Sababtu waxa weeye mawjadaha ayaa aad u dheereeya.
Estuary isku darka toosan: Qolka labiska ee noocan ah, mugga biyaha cusubi waa mid aan macno lahayn marka loo eego mugga hirarka. Halkan waxa ugu badan badnaanshaha mowjadaha labiska ee leh milix lebbisan. Maaddaama ay adagtahay in wax lagu beddelo biyaha, ma jiraan wax isbeddel ah oo ku yimaadda milixdu. Sidoo kale ma jiraan lakabyo toosan oo ku jira tiirka biyaha.
dhabarka dambe: Waxa loola jeedaa nooca cirifka ee aan wabigu keenin. Sababta oo ah waxay ka jiraan aagagga leh heerar uumi sare leh. Uumi-baxa wuxuu keenaa fiirsashada milixdu inay aad u sarreyso. Sidoo kale, biyo la'aanta awgeed, waxay hoos u dhigtaa kororka cufnaanta sababtoo ah waa milix badan.
Guryaha kala go'a: waxay noqon karaan hal nooc ama mid kale, taasoo ku xidhan roobabka da'ay ee wakhtigaas. Waa halkan halka, iyadoo ku xidhan xaddiga roobka daqiiqad kasta, ay jiraan doorashooyin kala duwan. Haddii ay sare u kacaan, wabigu wuxuu qaadi lahaa biyo badan.
Dhirta iyo xayawaanka Estuary
Estuary wuxuu ka kooban yahay noocyo kala duwan oo flora iyo fauna ah. Inta badan noocyada dhirta waa biyaha. cawsduurkii, cawsduurkii iyo bagiyo ayaa soo baxay. Nidaamyada deegaanka oo ka kooban mangroves ayaa laga heli karaa dhul-badeed badan. Kuwani waa noocyada geedaha oo aad ugu adkeysanaya xaaladaha biyaha cusbada. Waxay ku habboon yihiin ciidda qoyan waxaana jira ilaa 70 nooc oo mangroves ah. Mangroves cad, madow, casaan iyo cawl ayaa soo baxay.
Qayb ka mid ah dhirta la xidhiidha mangroves waa cawska badda. Waxa kale oo aad ka heli kartaa meelo bannaan oo algae ah iyo phytoplankton badan. Dhanka xayawaanka, waxaa sidoo kale jira noocyo kala duwan oo xayawaan ah. Waxa ugu caansan iyaga waa zooplankton, maadaama iftiinka qorraxdu uu si fiican u galo biyaha.. Zooplankton-yadan waxay quudiyaan kalluunka estuarine, gaar ahaan herring, sardines iyo anchovies. Waxa kale oo jira tiro badan oo ah molluscs, qolofleyda, naasleyda, shimbiraha iyo xamaaratada qaarkood.
Estuaries waxay ka iman kartaa cimilo kasta, ha ahaato kulaylaha, qabowga ama qabowga, iyadoo ku xidhan loolka halka ay ku yaalaan. Si kastaba ha ahaatee, dabeecadeeda xeebta awgeed, cimiladeeda waxaa saameeya baaxadda badweynta. Sidaa darteed, xitaa gobollada qabow, cimiladu maaha mid aad u xun sida kuwa gudaha ku jira.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto waxa uu yahay estuary iyo astaamihiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » waa maxay estuary